Ama-Movie ama-50 ama-Great Horror wokubuka kuTubi
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ama-Movie ama-50 ama-Great Horror wokubuka kuTubi
by UBrianna Spieldenner April 1, 2020
by UBrianna Spieldenner April 1, 2020 25,139 ukubukwa
Cishe cishe wonke umuntu ohlala ekhaya kulezi zinsuku, amasayithi okusakaza athola ukuzivocavoca okungalindelekile. Abantu abaningi bebelokhu bethutheleka kuNetflix, i-Amazon Prime, neHulu ukuyolinda ukuhlukaniswa. Isevisi yokusakaza iTubi, noma kunjalo, kubonakala ngathi ayitholi umusi omningi, yize kumahhala ngokuphelele. Uma unesikhathi samahhala ezandleni zakho (esikwenzayo sonke), zinike isikhathi sokubuka ama-movie angama-50 amahle kakhulu eTubi njengamanje!
Umuntu angacabanga ukuthi njengoba kuyinsizakalo yokusakaza yamahhala, ngeke babe nekhathalogu enhle abangakhetha kuyo, kepha lokho akunjalo neze ngamathani ama-movie amahle kakhulu azobukwa eTubi. Ngihlele amafilimu ngezigaba ezinhlanu: ama-classic horror movie, ama-movie asabisayo ayesabekayo, ama-movie asabisayo angaphandle, ama-horror ayinqaba namahlaya ashaqisayo, ngathola nama-movie ama-horror horror. Ngakho-ke, funda ngezansi ukuze uhlole ama-movie amahle kakhulu owabukayo eTubi!
Ama-movie we-Classic Horror eTubi
I-Texas Chain Saw Massacre (1974): Indaba enengekayo kaTobe Hooper yomndeni kaSawyer odla inyama, ushaya iTexas eyodwa yentsha ngesikhathi!
I-Hellraiser (1987): Ama-80s ayehlanya, le movie i-crazier. Ibhokisi lephazili elingafani, i-zombie engenasikhumba, i-BDSM, amadimoni agqoke kahle, namabhakede egazi. Le movie inakho konke.
Suspiria (1977): Enye yamafilimu weGiallo aziwa kakhulu aqondiswa yinganekwane uDario Argento. Le flick enemibala ilandela intombazane yaseMelika ebhalisa esikhungweni sokudansa esihlonishwayo saseJalimane esiqhutshwa ngabathakathi ngasese.
Usuku lokufa (1985): Ukulandelwa okugujwayo kobusuku bukaGeorge Romero kanye noDawn of the Dead. Iqembu lososayensi nabezempi banamathele ngaphakathi endlini engaphansi komhlaba njengoba i-apocalypse ye-zombie ibasongela ngenhla.
I-Carnival of Souls (1962): I-movie emnyama nomhlophe engabongwa kahle lapho kwenzeka khona izinto ezingajwayelekile kowesifazane kulandela ingozi yemoto eyinhlekelele.
Killer Klown Esivela Eskhathini Esingaphandle (1988): Le movie ye-quirky horror inabafokazi abafihliwe njengoba ama-clown esabisa idolobha laseMelika.
Ikamu Lokulala (1983): Leli kamu lasehlobo lihambe slasher yincazelo yekhempasi, enesiphetho ozoyikhumbula.
Rabid (1977): I-movie ka-David Cronenberg enobudlova futhi evusa inkanuko yocansi. Owesifazane osemusha uba nokukhula okuxakile okumenza afise igazi ngemuva kokuhlinzwa ngokweqile kulandela ingozi yesithuthuthu.
I-Ginger Snaps (2000): Le filimu yesifazane eza eminyakeni yobudala kungenzeka ukuthi iyibhayisikobho eqabula kunazo zonke oyoke uyibone. Imiphumela ebonakalayo emihle mihle kakhulu.
Ukubulawa Kweqembu Elilala (1982): Umdidiyeli ophambene osebenzisa i-drill uphazamisa iphathi elele ngokocansi kule filimu yakudala. Iphinde yenze okuncane ukugcizelela uhlobo lwe-slasher ngezindlela ezinhle ngaphambi kwesikhathi salo.
Amakhasi: 1 2 3 4 5